Kurarama mukuwirirana nevamwe - Afrikhepri Fondation
Urarame muchienderana nemumwe
Garai zvakanaka mumwe nemumwe
Cmuongorori wemanzwiro edu, imwe ndiyo inokonzeresa zvishuwo zvedu, kuzarura kusakwana kwedu, kumutsa simba rehungwaru hwedu, chiumbwa chinotidzosera kuhupenyu hwekuziva patinorasikirwa nenzira yedu zvakawandisa fungidziro.
Iyo inomiririra iyi mhepo yakasimuka iyo yatinofanira kushandisa kushandura isu pachedu ndege chaiyo ye existential system yatiri kurarama uye iyo inenge ine antivitational couple inherent muzvose.
Kukwezva - kudzingana, rudo-ruvengo, rima-kusuwa, mufaro-kutambudzika, hupenyu-kufa havasi vanopikisa asi zvakadaro zvakabatana zvine hukama hwakakwana hwehukama?
Saka nei mumwe munhu aisakwanisa kugara pamwe neni?
Kushungurudzwa nenyaya yekuti anogona kuve chigumbuso uye dombo rekunyongana, tinozvivharira munzvimbo yekuzviparadzanisa, tinovanza manzwiro edu mushongwe yenyanga dzenzou kana isu kuvaka chivharo chechipfuva chendarira. zvinoita kunge zvisingapindike, asi hazvigoneke kwatiri kuti tidzivirire mifungo yedu kufamba zvakasununguka muchadenga nenguva uye nekugadzira mweya-fomu.
Kuziva kwedu mumwe nomumwe chikamu chinokosha chekubatana kwehana.
Kunyangwe isu mweya-weboka rakasvibiswa nemavara akasviba uye kumeso kwaro kwakacheneswa nezvikanganiso, madhiri haarambi ari pazasi pemudziyo here?
Kuyeuka kwevanhu kunoramba kuri muzvinyorwa zvenyika sezvakanyorwa nokusingaperi pamahwendefa asina kushandiswa.
Vamwe vanozoedza kuzvinyepera uye voedza kunyora zvakare nhoroondo yemadzitateguru edu pa palimpsest asi ivo vachazouya vasingafungire kufamba kwenguva iyo ichaburitsa pachena kumeso epasi kunyengera kwavo uye vachapedza chifukidziro chejoki ichi nekuti chokwadi hachichabatike uye zvichingodaro. ndiye achapupura kuvarume panguva yakafanira.
Apo pfungwa dzakapanduka, apo pfungwa dzevanhu dzichazadzwa zvizere uye dzichava nyika yakanaka yekugamuchira mbeu yezvokwadi ipapo zvinhu zvose zvicharatidzwa uye chokwadi chichakunda nhema.
Kana vhiri rekufa rapedza kutenderera kwaro kwekupedzisira uye nhapwa dzamazuvano dzava madzimambo uye avo vanovauraya vanotora nzvimbo yavo sevakafira kutenda mukupedzisira karmic kutenderera, ipapo kubuda kwemutemo wechiyero kunosimbisa kuwirirana pakati penyika.
Hakuchazove nemubvunzo wekusaenzana pakati pemadzinza, pakati penyika uye nepakati pevanhu nekuti isu tichava takanzwisisa kuti isu tese tinobva kune imwechete quintessence, kuti isu tiri veboka rimwechete kuziva uye kuti isu saka tichagovana nhaka imwecheteyo.
Uranda, kukoloniwa, maitiro echinyakare, uye marudzi ese ekusaenzana zvichabviswa uye misiyano yetsika, madzinza, mitauro, zvitendero kana kunyange pfungwa dzinozoenderana nekushanduka kwevanhu.
Nguva iri kuuya apo vatorwa, vatorwa, vatapwa, nherera, marara havazogoni kudzoserwa kumasuo kana kutoshorwa nekuda kwekusiyana kwavo.
Nekuti mutorwa ndiye uyo, mune zvega zvega zvekuvapo kwake, asina kudzidza kuzviziva.
Vanhu vemaJapan - VaJudha vemaAfrica uye nhema ye madzinza akarasika
Bhuku reUrantia (PDF)
Tarisa Mahara mamiriro emakoni (2016)
Tanzania inowana mubairo weAfrica mutsva nehurongwa hwekuchera mvura
Teererai kuMu-Muntu redhiyo